चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना चल्छ भन्नेमा एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन् : पुर्व अध्यक्ष केडिया बुधबार, असार १, २०७९
विगत होइन भविष्य हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ : अध्यक्ष जलान मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
सक्रिय महिला उद्यमीहरुले न्याय पाउन स्थलगत अनुगमनको अभाव : महिला उद्यमी दास सोमबार, जेठ ३०, २०७९
वडावासीको आधारभूत आवश्यक्ता नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ : वडाअध्यक्ष सिंह आइतबार, जेठ २९, २०७९
गर्भवतीको मानसिक तनावले बच्चालाई हानी : डा. यादव विरामीलाई सफा बस्न लगाउने, ताजा र सफा खानपिनमा पनि ध्यान दिने । खानामा दुध अन्डा सुप झोल प्रदार्थ बढी मात्रामा हुनु पर्दछ । खानेकुरा पौष्टिक हुँदा बच्चाले आमाको दुध राम्रोसंग पाउँछ । बुधबार, जेठ २५, २०७९
बिषादी प्रयोगले वर्तमानमा अझ योगको आवश्यकता : अध्यक्ष गुप्ता मानिसहरुको शरीरमा भएको विशाक्तता फाल्नका लागि पनि अहिले योग आवश्यक्ता छ । पहिलेका मानिसभन्दा पनि योग अहिलेका मानिसमा बढि आवश्यक छ । तर गर्ने बानी छैन । बुधबार, जेठ २५, २०७९
बर्तमान बजेट चुनावलाई दृष्टिगत गरेर ल्याईएको हो : उपाध्यक्ष गौतम यत्रा ठूला उद्योग छन् । तर एउटा पनि सरकारी उद्योग छैन । सरकारी उद्योग हुनुपर्छ । नत्र हामी जग्गा किनेर उद्योग गर्न सक्दैनौं भनेका छौं । तर त्यो कुरा बजेटले बोलेन । सोमबार, जेठ २३, २०७९
बाँझोपनको उपचार सम्भव : डा.श्रुती साह आइभिएफ प्रविधिमा महिलाको डिम्बासयबाट डिम्बलाई अलग गरी शरीर बाहिर ल्याबमा पुरुषको शुक्रकिटसँग निषेचित (फर्टिलाइज) गरिन्छ । आइतबार, जेठ २२, २०७९
वर्तमानमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी फिजियोथेरापीः फिजियोथेरेपिस्ट डां. सत्य नारायण हाडजोर्नी तथा नसासम्बन्धी समस्या लिएर आउने बिरामीमा प्रायःजसो हड्डी खिइएर नसा च्यापिएका, घाँटीको हड्डी खिइएका, हड्डी कमजोर भएका, क्याल्सियमको कमीले हड्डी बांगिने र कति त जन्मजात हड्डी बांगिएका जस्ता समस्या हुन्छन् । बुधबार, जेठ १८, २०७९
ग्याष्ट्रिक विग्रिएर अल्सर र क्यान्सर हुन सक्छ : डा. गुप्ता इन्डोस्कोपी गर्दा खेरी आमाशय भित्र के छ त्यो छर्लङ्ग देखिन्छ । तर त्यसमा हामीले इन्डोस्कोपि गरिसकेपछि एक्स पाइलोरी भन्ने ब्याक्टेरीया हुन्छ । मंगलबार, जेठ १७, २०७९
बजेट भाषणमा खासै क्रान्ति आएको छैन : उद्योगपति गणेश लाठ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा बिधुत र करमा केही छुट भए पनि बजेट कार्यन्वयनमा शंका छ । मंगलबार, जेठ १७, २०७९
महानगरका ३२ वडा मध्ये नमूना वडा बनाउन महिलालाई भोट : वडाध्यक्षका उम्मेदवार गुप्ता शनिबार, वैशाख २४, २०७९
चुनाव हार्ने डरले मेरा प्रतिद्वन्द्वीहरु पैसाको खोला बगाउँदैछन् : वडाध्यक्षका उम्मेदवार अजय गुप्ता मलाई पनि निवर्तमान मेयर साहेको समर्थन छ, मेयर साहेलाई पनि मेरो समर्थन छ । अबको आउने दिनमा यस्तो काम हामीले गरेर देखाउँछौं कि विपक्षीलाई कहि कतै औला उठाउने ठाउँ हुँदैन् । शनिबार, वैशाख १७, २०७९
भ्रष्टाचार रहित निश्पक्ष विकासको लागि मेरो उम्मेदवारी : यसवन्त यादव गरिबलाई पढाउन र उपचार गराउन धेरै नै समस्या छ । तसर्थः संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारभित्र रहेको बेरोजगारी समस्या सामाधान गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र पालिकास्तरमै स्तरीय उपचारको व्यवस्थापन गर्नेछु । बिहीबार, वैशाख १५, २०७९
शिक्षा निस्वार्थ बाडिने ज्ञान हो : प्रिन्सिपल यादव विद्यार्थीहरुले नपढे पनि कक्षा अपग्रेडिङ गर्नु पर्ने नीति भएकोले साक्षरता दरमा संख्यात्मक वृद्धि त हुन्छ । तर शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको पाइदैन । आइतबार, चैत २७, २०७८
बच्चाको कानमा तेल हाल्नु हुन्न : डा दास (अन्तरवार्ता) कान पाकी सकेपछि सिउडीको रस वा तेल हालेर केही हुँदैन । त्यसले केही समयलाई आराम दिए पनि कानको जालीलाई नै प्वाल पार्ने गरी असर गर्छ । यदी कान पाकेको छ भने कानको डाक्टरको सल्लाह अनुसार ड्रपहरु प्रयोग गर्नु पर्छ । बुधबार, चैत २३, २०७८